नेप्से स्थिर, कारोबार रकममा समान्य सुधार | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नेप्से स्थिर, कारोबार रकममा समान्य सुधार
on: January 24, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
नेप्से स्थिर, कारोबार रकममा समान्य सुधार
माघ १०, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से शून्य दशमलव २० अंक घटेर बन्द भएको छ । १ हजार १ सय ७२ दशमलव ८० विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक एक घण्टामा बढेर १ हजार १ सय ७५ दशमलव ४७ विन्दुमा पुगेको थियो । सो विन्दुमा धेरै बेर टिक्न नसकेको परिसूचक दोस्रो घण्टामा यस दिनको न्यून विन्दु १ हजार १ सय ७० दशमलव १८ विन्दुसम्म पुगेको थियो । अन्त्यमा नेप्से १ हजार १ सय ७२ दशमलव ७८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । कारोबार भएका दश समूहको परिसूचकमा पाँच समूहको परिसूचक बढेको छ भने पाँच समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से स्थिर अवस्थामा बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ ।
बिहीवार रू. ३१ करोड ५४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिन बुधवारको कारोबारको तुलनामा २७ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ । बुधवार रू. २४ करोड ७७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत घटेर २ सय ४८ दशमलव ६५ विन्दुमा पुगेको छ ।
कुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो कुनको घट्यो ?
कारोबार भएका कम्पनी मध्ये ५६ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ७९ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । कन्काई विकास बैंकको शेयर मूल्य ५ दशमलव १३ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय २३ मा कारोबार भएको छ । नागरिक लगानी कोषको शेयर मूल्य रू. १ सय ३० ले बढेको छ । जनता बैंकको संस्थापक तर्फको शेयर मूल्य ८ दशमलव २६ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ११ मा कारोबार भएको छ । नागवेलि लघुवित्तको शेयर मूल्य ५ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. ७ सय ४० मा कारोबार भएको छ ।
१६२ कम्पनीमा सबैभन्दा बढीको कारोबार कस्को ?
बिहीवार नागरिक लगानी कोषको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. २ हजार ७ सय ३९ मा रू. ३ करोड ३८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । दोस्रोमा अपर तामाकोशी हाइड्रोपवारको प्रतिकित्ता रू. २ सय ७४ मा रू. ३ करोड ३७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।